“Waan ka qoomameynayaa imaatinkeyga Manchester City ee waqtigan” – Riyad Mahrez – Gool FM
Dajiye November 11, 2019
(Manchester) 11 Nof 2019. Xiddiga reer Algeria iyo kooxda Manchester City ee Riyad Mahrez ayaa ka hadlay sanadkan 2019, maadaama uu u yahay isaga sanad aan caadi aheyn, kaddib markii uu xulkiisa qaranka kula guuleystay Koobka Qaramada Afrika.
Riyad Mahrez ayaa dhinaca kale muujiyay sida uu uga xun yahay inuu ka soo daahay imaatinkiisa kooxda Manchester City, kaddib markii uu Leicester City kula soo guuleystay horyaalka Premier League xilli ciyaareedkii 2015/2016.
Riyad Mahrez ayaa wareysi uu ku bixiyay majalada “France Football” wuxuu ku sheegay:
“Waxaan u maleynaa in labo sano oo nolosheyda ah aan ku qaatay Leicester City, waxaan imid magaalada Manchester anoogoo 27 sano jir ah, waxaan ku imaan karay halkan anigoo 24 sano ah”.
“Leicester City waxay ii diiday inaan ka tago, waxay ii sheegeen inaan ka bixi doonin, wakiilkeygu wuxuu la hadlay Arsène Wenger oo si aad ah u doonayay saxiixeyga xagaagii 2016-dii”.
“Runtii aad ayaan u jahwareeray, wax fudud ma ahan adigoo ah xiddiga ugu fiican Premier League, inaad isku badelo ciyaaryahan u dagaalamaya in la taageero”.
Inaas kaddib Riyad Mahrez ayaa wuxuu ka hadlay xiriirka kala dhexeeya macalkiisa kooxda Man City ee Pep Guardiola, wuxuuna yiri:
“Had iyo jeer wuxuu u ciyaaraa sida uu ku guuleysan lahaa, wuxuu inoo sharaxaa wax walba si kulamada aan ciyaareyno ay fudeed inoogu noqdaan anaga, waxaan jeclahay inaan la shaqeeyo oo aan wax ka barto isaga, isla markaana aan sii joogo”.